Madaxda Dowlad goboleedyada oo shir la leh Musharixiinta | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxda Dowlad goboleedyada oo shir la leh Musharixiinta
Madaxweyneyaasha dowlad Goboleedyada dalka iyo Midowga Musharaxiinta ayaa kulan albaabada u xiran yihiin ku leh Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Shir u dhaxeeya Golaha Midowga Musharixiinta Soomaaliya iyo Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada ayaa ka socda huteel ku yaalla Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Kulankaan ayaa ku soo aadaya xilli ay saacado ka hor Musharixiintu ku dhawaaqeen in ay ka soo hor jeedaan qodobo ka mid ah habraacii doorashada Golaha shacabka ee ay shalay saxiixeen Golaha Wada-tashiga Qaran ee uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Rooble.
Madaxweynayaasha Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ayaa isku dayaya in ay Musharixiinta ku qanciyaan habraaca doorashada, kaas oo rameysan yahay in ay si weyn ugu lug leeyihiin Dowlad goboleedyada.
Deni, Madoobe, Qoorqoor iyo Laftagareen, ayaa si aan hore loo arag u boobay kuraasta Aqalka sare ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS, waana sababta sii joojineysa wacaala musharixiinta.
Dhanka kale, Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa maanta kulan la yeeshay Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad-goboleed oo ay ka wada hadleen dardar gelinta howlaha doorashooyinka iyo hirgelinta habraacyadii uu shalay soo saaray GWQ.